संखुवासभा किन जाँदैछन प्रधानमन्त्री ओली? – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > संखुवासभा किन जाँदैछन प्रधानमन्त्री ओली?
admin November 11, 2020 Uncategorized	0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार पूर्वी नेपालको चीनसँग सिमाना जोडिएको किमाथाङ्का नाका निरीक्षण्का लागि जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री ओली विहान साढे ८ बजे हेलिकप्टरमार्फत चीनसँग सीमा जोडिएको संखुवासभाको उत्तरी क्षेत्रको किमाथाङ्का नाका पुग्ने कार्यक्रम तय भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।प्रधानमन्त्रीले चीनसँग सीमा जोडिएको भोटखोला गाउँपालिका-१ मा पर्ने किमाथाङ्का नाकाको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले झण्डै एक वर्षअघि त्यहाँ स्थापना भएको सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी)को निर्माणधीन भवन सँगै भन्सार कार्यालय र सुख्खा बन्दरगाहको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । संखुवासभा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको अनुगमनसमेत गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री ओली बुधबार दिनभर संखुवासभामा रहने छन् । सचिवालयका अनुसार बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो साढे ३ बजेसम्मका लागि कार्यक्रम तय भएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र केही सांसद पनि संखुवासभा जाँदैछन् ।
यो पनिः प्रचण्डलाई ‘अर्को सीपी मैनाली’ बनाउने
प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटस्थहरु अचेल बारम्बार दोहोर्‍याई रहन्छन्– प्रचण्ड कि त ‘ओलीको लाइन’ मा हिंड्नु पर्‍यो, कि त उनलाई ‘परेड खेलाइन्छ’ र ‘अर्को सीपी मैनाली’ बनाइन्छ ।
उनीहरु बढो प्रष्ट भाषामा भन्दैछन्, ‘महाधिवेशनसम्म धैर्यता गर्ने र जबजको लाइन पक्रिने हो भने ओलीकै समर्थनमा उनी अध्यक्ष हुन सक्दछन्, यदि दायाँबाँया गर्ने हो भने अर्को सीपी मैनाली हुन राजी भए हुन्छ ।’
यस्तो ‘धम्कीको भाषा’ प्रयोग गर्नेहरु महेश बस्नेत, दयाल बहादुर शाहीजस्ता ओली निकटस्थ दोस्रो, तेस्रो तहका नेता, कार्यकर्ता मात्र छैनन्, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले समेत निकटस्थहरुसंग ‘पार्टीको आधिकारिक सिद्धान्त जबज हुने’, आगामी महाधिवेशनमा हुने ‘वैचारिक संघर्ष’ लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने र जबजवादीहरुसँग टकराउनेहरुको हालत सीपी मैनालीको जस्तो हुने बताउने गरेका छन् ।
सीपी मैनालीको हालत के भएको थियो ?
सीपी मैनाली झापाली विद्रोहबाट बनेको माले धारका संस्थापक नेता थिए । २०२७ सालको झापा विद्रोहमा मैनाली पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटीको झापा कमिटीका सचिव थिए । २०३१ सालमा को–अर्डिनेशन केन्द्र बन्दा उनी महासचिव थिए ।
त्यसपछि गिरफ्तार भएका मैनाली जेल परे । २०३३ सालको नक्खु जेल ब्रेक गरी उनी भारत निर्वासित भएका थिए । मैनालीले त्यसपछिका केही वर्ष भारतमै बिताएका थिए । २०३५ सालमा मोरङको इटहरा गाउँमा नेकपा (माले) गठनको भेला भएको थियो । त्यो भेलाले मैनालीलाई नै पार्टीको महासचिव बनाएको थियो ।
पाँचै जना छोराछोरी अपाङ्ग बनाएर भगवान यो कस्तो सजाय दियौं हामीलाई – भिडियो सहित
९ जनाको विभत्स हत्या भएको ठाउँ नजिकै झुन्डिएको अवस्थामा एक युवकको शव फेला, घटना रहस्यमय बन्दै